OTU ESI EHICHAPỤ AKAỤNTỤ TWITTER RUE MGBE EBIGHI EBI - TWITTER - 2019
Futuremark bụ onye ọsụ ụzọ na-emepụta akpa ule. Na nyocha ule 3D, ọ na-esi ike ịchọta ndị ọgbọ. Nchọpụta 3DMark aghọwo ihe a ma ama maka ọtụtụ ihe kpatara ya: ihu ha mara ezigbo mma, ọ dịghị ihe siri ike n 'iduzi ha, na nsonaazụ ya na-adịgide adịgide ma na-emegharị. Ụlọ ọrụ ahụ na-akwado ndị na-emepụta kaadị vidiyo mgbe nile, nke bụ ihe mere e ji ewere na Futuremark bụ ihe kacha mma ma dị mma.
Mgbe echichi na mmalite nke usoro ihe omume ahụ, onye ọrụ ga-ahụ window nke usoro ihe omume ahụ. N'okpuru windo ahụ, ị ​​nwere ike nyochaa njirimara dị mkpirikpi nke usoro gị, ihe nlereanya nke nhazi ahụ na kaadị vidiyo, yana data gbasara OS na ọnụego RAM. Usoro nke usoro ihe omume a nwere nkwado zuru oke maka asụsụ Russian, ya mere, n'iji 3DMark emekarịghị nsogbu.
Ọnụ ụzọ ámá ojii
Usoro ihe omume ahụ na-eme ka onye ọrụ malite inyocha Ọnụ Ụzọ Ígwé ojii. Okwesiri ighota na enwere uzo di iche iche na 3DMark obuna na akwukwo nke di na ya, onye obula n'ime ha weputa ule onwe ya. Ọnụ Ụzọ Ígwé ojii bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mfe ma dị mfe.
Mgbe ịpịpị bọtịnụ mmalite, windo ọhụrụ ga-apụta ma nchịkọta ozi gbasara PC ga-amalite.
Malite nyocha. E nwere mmadụ abụọ n'ime ọnụ ụzọ ámá ojii. Oge nke ọ bụla dị ihe dị ka nkeji, ma na ala ihuenyo i nwere ike ịhụ ọnụego osisi (FPS).
Nlere mbụ ahụ bụ eserese ma mejupụtara akụkụ abụọ. Na akụkụ mbụ nke kaadị vidiyo a na-edozi ọtụtụ ọnụ ọnụ, enwere ọtụtụ nmetụta dị iche iche na ahụ. Akụkụ nke abụọ na-eji ọkụ ọkụ volumetric na arụmọrụ dị nfe na-arụ ọrụ nhazi.
Nlere nke abụọ na-adabere n'anụ ahụ ma na-eme ọtụtụ simulations ahụ nkịtị, nke na-arụ ọrụ n'elu usoro nhazi.
Na njedebe nke 3DMark ga-enye ọnụ ọgụgụ zuru ezu banyere ihe si na ya pụta. Nke a nwere ike ịchekwa ma ọ bụ tụnyere ntaneti na nsonaazụ ndị ọrụ ndị ọzọ.
Ihe ngosi 3DMark
Onye ọrụ nwere ike ịga na taabụ "Ule"ebe enwere ike ịlele usoro nyocha niile. Ụfọdụ n'ime ha ga-adị naanị na nsụgharị ụgwọ nke usoro ihe omume, dịka ọmụmaatụ, Fire Strike Ultra.
Site na ịhọrọ nhọrọ ọ bụla a chọrọ, ị nwere ike imata onwe gị na nkọwa ya na ihe ọ ga-elele. Ị nwere ike ịrụ ntọala ndị ọzọ nke benchmark, gbanyụọ ụfọdụ n'ime nzọụkwụ ya, ma ọ bụ họrọ mkpebi ahụ chọrọ na ntọala ndị ọzọ ndị ọzọ.
O kwesiri iburu n'uche na ichota otutu ule na 3DMark choro inwe ihe omimi nke oge a, karia, kaadị vidiyo na nkwado maka DirectX 11 na 12. Ikwesiri ma odikaru ala ihe abuo, ma RAM adighi ihe kariri 2-4 gigabytes. Ọ bụrụ na akụkụ ụfọdụ nke usoro onye ọrụ adịghị adaba maka ịgba ọsọ ahụ, 3DMark ga-akọ maka ya.
Otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị na-egwu egwuregwu bụ Fire Strike. A haziri ya maka PC ndị dị elu ma na-enwerịrị mmasị banyere ike nke ndozi ndịna-emeputa.
Nlere mbụ bụ ihe ngosi. N'ime ya, ebe ahụ jupụtara na anwụrụ ọkụ, ọ na-eji ọkụ ọkụ volumetric, na ọbụna kaadị ndị kachasị ọhụrụ na-enweghị ike ịnagide nchịkọta kachasị nke Fie Strike. Ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu na-ezukọta na ọtụtụ kalịnda vidiyo n'otu oge, na-ejikọ ha na usoro SLI.
Nnwale nke abụọ bụ anụ ahụ. Ọ na-agba ọtụtụ nkedo nke anụ ahụ dị nro na nke siri ike, nke na-eji ike nke nhazi.
A jikọtara nke a - ọ na-eji tessellation, nhazi nhazi, ọkụ ọkụ na-ese, na-agba ọsọ nchịkọta physics, wdg.
Oge Nledo bụ akara aka nke oge a, ọ na-akwado nkwado niile ọrụ API, nchịkọta asynchronous, multithreading, wdg. Iji nwalee, ma e wezụga na onye ntanetị ndị na-ahụ maka mgbasa ozi aghaghị ịnwe nkwado maka mbipute 12 kachasị nke DirectX, yana mkpebi nyocha nke onye ọrụ ga-abụ ihe na-erughị 2560 × 1440.
Na nhazi nke mbu, a na-edozi ọtụtụ ihe ndị na-agbanwe agbanwe, yana onyinyo na tessellation. Na nyocha nke abụọ, ndị na-ese onyinyo na-eji ọkụ ọkụ ọkụ, ọtụtụ ihe dị nro dị.
Ihe na-esote bụ nlele ike nhazi. A na-eji usoro anụ ahụ eme ihe mgbagwoju anya, a na-eji usoro ọmụmụ ihe eme ihe, nke ọ na-agaghị ekwe omume ịnagide mkpebi mmefu sitere na AMD na site n'aka Intel.
A na-emepụta Sky Diver iji kwado ya na DirectX 11 kaadị vidiyo. Nchịkọta akara ahụ adịghị mgbagwoju anya ma na-enye gị ohere ịchọpụta arụmọrụ nke ndị na-arụ ọrụ mkpanaka na ndị na-emepụta ihe ndị e kere eke na-etinye na ha. Ndị ọrụ nke PC ndị na - esighị ike ga - ebutere ya, n'ihi na ndị ozo dị ike iji nweta nsonaazụ kwesịrị ekwesị agaghị enwe ihe ịga nke ọma. Mkpebi nke oyiyi ahụ dị na Sky Diver na-adaba na mkpebi nyocha nke nyocha ihuenyo.
Akụkụ ahụ nwere akụkụ nke obere ule. Nke mbụ na-eji usoro ọkụ ọkụ na-elekwasị anya na tessellation. N'otu oge ahụ, ule nyocha nke abụọ na-ebufu usoro ahụ na nhazi pixel ma jiri usoro ntanetị dị elu karị nke na - eji shaders arụ ọrụ.
Nnwale ahụ bụ nyocha nke ọtụtụ usoro nhazi. A na-emepụta ihe osise, bụ nke a na-ebibi mgbe ahụ site n'enyemaka nke ọkpụkpụ na-agbanye na ígwè. Ọnụ ọgụgụ nke ihe oyiyi ndị a ji nwayọọ nwayọọ na-amụba ruo mgbe PC processor na-etinye aka na ọrụ ndị e kenyere site na ịkụda hama na ọkpụkpụ ahụ.
Ihe ọzọ ederede, Ice Storm, oge a zuru oke n'elu ikpo okwu, ị nwere ike ịgba ya na ihe ọ bụla ngwaọrụ. Ntinye ya na-enye anyị ohere ịza ọtụtụ ajụjụ gbasara mmasị maka ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na ndị na-ese foto ndị e ji arụ ọrụ na smartphones bụ ndị na-adịghị ike karịa ihe nke kọmputa ndị oge a. Ọ na-ekpochapu ihe niile nwere ike imetụta site sistemụ arụmọrụ nke kọmputa onwe onye. A na-atụ aro ka ị jiri ya ọ bụghị naanị ndị ọrụ nke ngwa ngwa, kamakwa ndị nwe ochie ma ọ bụ kọmputa dị ala.
Site na ndabara, Ice Storm na-agba ọsọ na mkpebi nke 1280 × 720 pikselụ, ntọala mmekọrịta na-agbanyụ, na ebe nchekwa vidiyo anaghị achọ ihe karịrị 128 MB. Ngwá ọrụ ntụgharị nke Mobile na-eji OpenGL engine, ebe PC dabeere na DirectX 11, ma ọ bụ dịtụ ntakịrị na njedebe ya na Direct3D 9.
Nlere mbụ bụ ihe osise, ọ na-ejikwa akụkụ abụọ. Akpa, onyunyo na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke oghere dị iche iche, na nke abụọ, a na-enyocha ọrụ nhazi ma na-atụkwasị ihe nhụba ahụ.
Nnwale ikpeazụ bụ anụ ahụ. Ọ na-eme nchọpụta dị iche iche na mmiri anọ dị iche iche n'otu oge. Na nkwekọ nke ọ bụla, e nwere ụzọ dị nro na otu ụzọ siri ike na-ejikọta ibe ha.
E nwekwara otu nsụgharị dị ike nke ule a, nke a na-akpọ Oké Mmiri Oké Ifufe. Naanị ngwaọrụ mkpanaka kachasị elu, ihe a na-akpọ flagships, nke na-agba ọsọ na gam akporo ma ọ bụ iOS, ka a nwalere ule dị otú a.
API arụ ọrụ ule
Egwuregwu oge a maka etiti ọ bụla chọrọ ọtụtụ narị na ọtụtụ puku data dị iche iche. Ndabere API a bụ, ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị. Site n'ule a, ị nwere ike iji ọrụ dị iche iche API tụnyere. A naghị eji ya dịka ihe ntanetịime kaadị.
A na-eme nchọpụta dị ka ndị a. Enwere ike ịnweta otu API ngwa ngwa, nke na-enweta nnukwu ọnụọgụ nke oku. Ka oge na-aga, ibu dị na API na-abawanye ruo mgbe ọnụọgụ osisi na-amalite idobe ala karịa 30 kwa nkeji.
Iji ule ahụ, ị ​​nwere ike iji otu kọmputa kọwaa otu ụdị API si akpa àgwà. Na ụfọdụ egwu egwuregwu nke oge a, ị nwere ike ịgbanwe n'etiti API. Nlele ahụ ga-ekwe ka onye ọrụ ahụ chọpụta ma ọ bụrụ na ịtụgharị si, kwuo, DirectX 12 maka ọhụrụ Vulkan ga-enye ya nnukwu mmelite ma ọ bụ na ọ bụghị.
Mkpa maka ihe PC maka ule a dị elu. Ịkwesịrị ọbụlagodi 6 GB nke RAM na kaadị vidiyo nke nwere ihe nchekwa nke dịkarịa ala 1 GB, na mgbawa ndị na-ese foto ga-abụ nke dị ugbu a ma nwee ọbụlagodi nkwado API.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ule nile a kọwara n'elu nwere, na mgbakwunye na ọnụọgụ ụfọdụ, nchịkwa. Ọ bụ ụdị omume e dekọrọ na mbụ ma megharịa ya iji gosipụta ihe niile nwere ike igosi na 3DMark benchmark. Nke ahụ bụ, na vidiyo ị nwere ike ịhụ ogo kachasị mma nke ndịna-eserese, nke na-abụkarị ọtụtụ ugboro karịa ihe ị nwere ike ịhụ mgbe ị na-elele PC onye ọrụ.
Enwere ike gbanyụọ ya site na ịgbanwuo mgbanwe mgbagwoju anya kwekọrọ na ya, na-abanye na nkọwa nke ule ọ bụla.
Na taabụ "Nsonaazụ" gosipụtara akụkọ ihe mere eme nke njirimara niile eji eme ihe. N'ebe a, ị nwekwara ike ibudata nsonaazụ ego ma ọ bụ ule ndị e mere na PC ọzọ.
Na taabụ a, ịnwere ike ịmegharị ndị ọzọ na akara ngosi 3DMark. Ị nwere ike ịhazi ma zoo ihe nchoputa na saịtị ahụ, ma ọ bụ iṅomi usoro ihe ọmụma nke kọmputa. Ịnwekwara ike ịhazi ụda ụda n'oge ule, họrọ asụsụ mmemme ahụ. Ọ na-egosiputa ọnụ ọgụgụ nke kaadị vidio ndị dị na nkwụnye ego, ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ nwere ọtụtụ. Enwere ike ịlele ma mee ka melite nyocha nke onye ọ bụla.
Nnwale dị ukwuu nke PC ma dị ike ma ndị ike;
Nchọpụta nke ngwaọrụ mkpanaka na-arụ ọrụ dị iche iche sistemụ;
Ikike iji tụnyere nsonaazụ ha nwetara na nyocha site na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Okwesighi nma maka nyocha nke tessellation.
Ndị na-arụ ọrụ n'ọdịnihu na-emepụta ngwa 3DMark ha, nke ọ bụla nke ọhụụ ọ bụla na-aghọ ihe dị mma na ọkachamara. Ihe omuma a bu uzo a kwadoro n'uwa dum, obu ezie na o nweghi ihe ozo. Ọbụna karịa - nke a bụ usoro kachasị mma maka ịnwale smartphones na mbadamba na-arụ ọrụ dị iche iche usoro arụ ọrụ.
Download 3DMark maka n'efu
Nyocha Uche TFT AIDA64 Sisoftware sandra Dacris Benchmarks
3DMark bụ ebe a na-ewu ewu na-arụkarị ọrụ maka nyochaa arụmọrụ nke PC na ngwaọrụ mkpara.
Onye Mmepụta: Futuremark
Size: 3,891 MB